China KWESOKUDLA EKHAYA: Holiday Decor inikeza amnandi sugarplum anemibala Abakhiqizi futhi Factory | Qingliu
Ifoni: + 86-0539-8372931 (uMnyango Marketing)
Izimbiza & Abatshali
KWESOKUDLA EKHAYA: Holiday Decor inikeza amnandi sugarplum anemibala
Kuleli ulwandle ezithile zonyaka abomvu green noma isiliva okwesibhakabhaka, kukhona amnandi, Iphalethi kwenye indawo iholide lokubhalela.
Cabanga nezithelo ezintsha candies bonke bakujabulela lokhu, futhi uwena oyiwonawona - kungcono okuyenga, uhlu enchanting ka sugarplum anemibala ukuthi ikhaya Abahlobisi zingaba nobumnandi nge.
"Bhangqa candy-apula elibomvu, pink plummy kanye berry-elikhanyayo florals nge imifino ebusika okwesikhathi mhlobiso," kusikisela Melissa Benham Chicago ingaphakathi design firmStudio Gild. "Imihlobiso kulezi anemibala inikeze ezingalindelekile umbala pop ku isihlahla sikaKhisimusi, noma twist kumnandi kwi menorah zakudala uma isetshenziselwa Hanukkah amakhandlela."
umklami nomlobi Los Angeles ezisekelwe Orlando Soria uthi umbala kuyisihluthulelo okwenza yakho iholide ukugubha kukhanye elikhanyayo.
Ngisho noma uthola iqoqo kunalokho Motley of imihlobiso, "unezela e iplamu kanye berry-hued izindwangu, amakhandlela, izesekeli nemihlobiso kuyindlela enhle kakhulu ukwakha uhlelo lwemibala ebumbene," kusho yena.
Target has soft ethokomele nokujikijela imicamelo Opalhouse sika, noma nge iphethini plaid noma "Oh, Yini Fun" nemidwebo, anemibala fresh futhi zemikhosi.
Iqoqo Merrily at Pier 1 kuhlanganisa ngesandla kushaywa stemless yewayini ibhecwe izihlahla kicky yesimanje in pink, peach kanye berry. A candy-blue nokujikijela umcamelo is womfekethisi ibinzana "Merry & Bright" futhi ehlotshiswe emiphemeni. Ukuze esihlahleni, kukhona elihle lezimbali gumballs felted.
Imisa yoboya ezisongwe noma ibhodlela ibhulashi izihlahla ngobumnene hued macaron imibala ngabe ibukeke kahle etafuleni nabanye ukwakheka esithambile futhi wokuxhumanisa taper amakhandlela; thola ngawo wonke Umhlaba Market. Futhi e amaphastelsi okunoshukela kukhona uxhaxha lwamangqamuzana inyamazane cute little at Homegoods, ephelele Fluffy, i-marabou-feather ezinjengenyanga.
Ngezinye Wayfair, uzothola tinsel izihlahla etinhlotjeni letehlukene osayizi shades elinuka efana yamagilebhisi, iplamu, okusajingijolo kanye orange. Ngezinye Horchow, thola Trios ka hued efanayo ibhodlela-brush-isitayela izihlahla yokubonisa. Futhi Walmart has-40 intshi amathathu ubude plastic lollipop imihlobiso e cotton candy, lime ukhiye bese amajingijolo; kungahle kube mnandi ku kocingo engadini noma phambili kompheme ukubiya.
Bagqoke up esihlahleni, mantel, ezitebhisini noma ithebula iholide nge egqamile, felted-uvolo berry lezimbali Anthropologie sika. Deck out isihlahla sikaKhisimusi nge ingilazi iribhoni candy noma idwala candy imihlobiso anemibala Yummy, futhi Ngaphezu off nge Ferris isondo isihlahla Topper festooned nge emiphemeni ngokukhazimulayo hued. Futhi lapha, iqoqo Boxed obucayi ingilazi macarons; imihlobiso ziyonenza isipho lovely a amaswidi yesoka noma Francophile.
Uzothola okwengeziwe awukudla Faux mtoti kwesihlahla noma iholide kwisibonisi ngesikhathi Barney eNew York, lapho Kurt Adler sika peppermint-candy lezimbali, ufafaze-isipikili ice cream cone zihambisana-candy imihlobiso ukuletha zonke amaphupho elimnandi ekhaya sugarplum isizini ngesitayela .
Christopher Radko sika ingilazi Candy Castle nomhlobiso at Horchow okubonisa candy enemininingwane izindondolo, peppermints no ayisikhilimu e ingilazi ngesandla ngesineke Polish. A esihlwabusayo ebukeka, 9-foot gumdrop lezimbali abangayithola Indlu Holiday.
Futhi ekugcineni, ukudambisa egcekeni iholide isibonisi Hammacher Schlemmer sika weziNkulungwane Amaphuzu of Light isihlahla zasendlini / ongaphandle. Itholakala ngobukhulu eziningana, layo izibani fiber-optic elikhanyayo candy imibala lingasethwa ashwibeka futhi udlale ngokuqhubekayo noma usethe kwisibonisi enesikhathi. Manje yilokho emibonweni sugarplums dancing ngempela.
isikhathi Iposi: Mar-13-2019
Hancun, Linshu Izwe, Linyi Idolobha, Isifundazwe Shandong, China
+ 86-0539-8372931 (uMnyango Marketing)
+ 86-0539-6310232 (uMnyango Production)
KWESOKUDLA EKHAYA: Holiday Decor inikeza amnandi ...